Litecoin inona no ary ahoana no hividianana Litecoin? Ny momba ny LTC | Vaovao momba ny gadget
Inona ny Litecoin ary ahoana no hividianana Litecoin?
Miguel Gaton | | Cryptocurrencies, General
Litecoin dia vola nomerika manondro isa (P2P) izay mifototra amin'ny rindrambaiko misokatra ary nahatratra ny tsena tamin'ny 2011 ho famenon'ny Bitcoin. Tsikelikely dia lasa cryptocurrency tsy fantatra anarana ampiasain'ny mpampiasa maro kokoa izy io, indrindra noho ny fahatsorana ahafahana mamorona ireo karazana vola ireo, ambany noho ny Bitcoin.
Na dia miresaka aza isika vola digital na crypto tsy misy hatak'andro Tonga ao an-tsaina ny bitcoin. Saingy tsy izy irery no nisy teny an-tsena, lavitra azy io, nandritra ny roa taona, Ethereum nanjary safidy matotra amin'ny BitcoinNa dia mifototra amin'ny sandan'ny tsirairay amin'ireo vola ireo aza isika, dia mbola lavitra ny lalan'ny Bitcoin, vola lasa endrika fandoavam-bola amin'ireo orinasa lehibe toa an'i Microsoft, Steam , Expedia, Dell, PayPal mba hanomezana ohatra vitsivitsy.
Tianao mampiasa vola amin'ny Litecoin? TSARA mahazo MAIMAIMPOANA $ 10 amin'ny Litecoin amin'ny fipihana eto
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia hasehoko anao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny Litecoin, inona izany, ny fomba fiasa ary ny toerana hividianana azy.
1 Inona ny Litecoin
2 Ny fahasamihafana misy eo amin'ny Litecoin sy Bitcoin
3 Iza no namorona Litecoin
4 Ahoana no ahazoako Litecoins
5 Tombony sy fatiantoka an'ny Litecoin
6 Ahoana no hividianana Litecoins
Inona ny Litecoin
Litecoin, toy ny sisa amin'ireo vola nomerika, dia cryptocurrency tsy fantatra anarana izay noforonina tamin'ny taona 2011 ho solon'ny Bitcoin, miorina amin'ny tamba-jotra P2P, noho izany tsy misy fotoana fehezin'ny fahefana rehetra, toy ny hoe mitranga amin'ny vola ofisialin'ny firenena rehetra, noho izany dia miovaova ny sandany arakaraka ny tinady. Ny tsy mitonona anarana an'io vola io dia mamela manafina ny maha-izy anao amin'ny fotoana rehetra ny olona izay manao ny fifanakalozana, satria amin'ny alàlan'ny kitapom-bola elektronika izay itehirizana ny volantsika rehetra. Ny olana amin'ireo karazana vola madinika ireo dia tsy miovaova, satria raha mandroba antsika izy ireo dia tsy azontsika fantarina hoe iza no nanary ny kitapontsika.
Ny blockchain, fantatra amin'ny anarana hoe blockchain, an'ny Litecoin dia mahavita mitantana volavola fifanakalozana avo kokoa noho Bitcoin. Satria matetika ny famokarana sakana, ny tambajotra dia manohana fifanakalozana bebe kokoa tsy mila manova ny rindrambaiko mitohy na amin'ny ho avy tsy ho ela. Araka izany, mahazo varotra haingana kokoa ny mpivarotra, ny fihazonana azy ireo dia manana fahaizana miandry fanamafisana bebe kokoa rehefa mivarotra entana lafo kokoa.
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny Litecoin sy Bitcoin
Amin'ny maha-derivative na fork an'ny Bitcoin azy, ny cryptocurrency roa dia mampiasa rafitra fiasa mitovy ary ny fahasamihafana lehibe dia hita ao ny isan'ny famoahana vola madinika an-tapitrisany, miorina amin'ny tranga Bitcoin amin'ny 21 tapitrisa, raha ny fetra farany ambony an'ny Litecoins dia 84 tapitrisa, In-4 bebe kokoa. Ny fahasamihafana hafa dia hita amin'ny lazan'ny vola roa, raha i Bitcoin dia fantatra amin'ny ankapobeny, ny Litecoin dia manamboatra tsikelikely an'ity tsena ity amin'ny vola virtoaly.
Makà MAIMAIM-POANA $ 10 amin'ny Litecoin amin'ny fipihana eto
Fahasamihafana hafa hitantsika rehefa mahazo vola virtoaly. Raha ny fitrandrahana Bitcoin dia mampiasa algorithm SH-256, izay mitaky fanjifàna avo lenta amin'ny processeur, ny fizotry ny fitrandrahana Litecoin dia miasa amin'ny alàlan'ny scrypt izay mitaky fahatsiarovana be dia be, avelao ny processeur.
Iza no namorona Litecoin
Mpiasa ao amin'ny Google teo aloha, Charlie Lee, no tao ambadiky ny famoronana Litecoin, nomena ny tsy fisian'ny fifandimbiasana eo amin'ny tsenan'ny vola virtoaly ary rehefa mbola tsy lasa vola iraisana ho an'ny karazam-bola rehetra. Niankina tamin'ny Bitcoin i Charlie fa ny fikasana avadiho ity vola ity ho lasa fomba fandoavam-bola izay nilamina ary tsy niankina be loatra tamin'ny trano fifanakalozana, zavatra izay azonay namboarina tsy mitranga amin'ny Bitcoin izany.
Ka noho io vola io tsy voakasiky ny vinavina, ny fomba hahazoana azy ireo dia tsotra kokoa sy ara-drariny kokoa, ka rehefa noforonina izy ireo dia tsy sarotra na mampihena ny isan'ireo vola azo. Bitcoin dia natao hitantanana vola madinika 21 tapitrisa, raha any Litecoin kosa dia misy vola mitentina 84 tapitrisa.
Ahoana no ahazoako Litecoins
Litecoin dia fork an'ny Bitcoin, noho izany ny rindrambaiko ho an'ny manomboka mitrandraka Bitcoins dia mitovy amin'ny fanovana madinidinika. Araka ny efa nolazaiko tetsy ambony, ny valisoa amin'ny fitrandrahana Litecoins dia mahasoa kokoa noho ny Bitcoin. Amin'izao fotoana izao isaky ny sakana vaovao dia mahazo Litecoins miisa 25 isika, vola izay ahena antsasaky ny 4 taona eo ho eo, vola kely lavitra noho izay hitantsika raha manokan-tena amin'ny fitrandrahana Bitcoins izahay.
Litecoin, toy ny crypto hafa rehetra, dia tetikasa lozisialy loharano misokatra navoakan'ny fahazoan-dàlana MIT / X11 ahafahantsika mihazakazaka, manova, maka tahaka ny rindrambaiko ary mizara azy. Navoaka tamin'ny fizotran'ny mangarahara ilay rindrambaiko izay mamela ny fanamarinana tsy miankina ny binary sy ny kaody loharano mifanaraka aminy. Ny rindrambaiko ilaina hanombohana ny fitrandrahana Litecoins dia hita ao amin'ny Pejy ofisialy Litecoin, ary azo alaina ho an'ny Windows, Mac, ary Linux. Azontsika atao koa ny mahita ny kaody loharano
Ny fiasan'ny fampiharana dia tsy misy mistery, satria isika ihany no mila sintomy ny programa ary hanomboka hanao ny asany fotsiny izy, raha tsy mila miditra an-tsehatra amin'ny fotoana rehetra isika. Ny fampiharana dia manome antsika fidirana amin'ny kitapom-batsy izay itehirizan'ny Litecoins rehetra izay azontsika ary avy aiza no ahafahantsika mandefa na mandray ireo vola virtoaly ireo ankoatry ny fizahana ny fifanakalozana rehetra izay efa notanterahinay hatreto.
Fomba iray hafa hitrandrahana Litecoins nefa tsy mampiasa vola amin'ny solosaina, dia hitantsika hoe Scheriton, rafitra fitrandrahana rahona Azontsika atao koa ny mitrandraka Bitcoins sy Ethereum. Scheriton dia mamela antsika hametraka ny habetsaky ny GHz tadiavinay hitrandrahana, mba hahafahantsika mividy hery bebe kokoa hahazoana ny Litecoins na ny vola virtoaly hafa haingana kokoa.
Tombony sy fatiantoka an'ny Litecoin
Ny tombony omen'i Litecoin antsika dia mitovy amin'ny hitantsika amin'ny vola virtoaly sisa, toy ny fiarovana sy ny tsiambaratelo rehefa manao karazana fifanakalozana, ny tsy fisian'ny kaomisiona hatramin'ny ny fifanakalozana dia atao amin'ny mpampiasa mankany amin'ny mpampiasa raha tsy misy ny fidiran'ny rafi-pitantanana sy ny hafainganana, satria ny famindrana ity karazana vola ity dia miaraka amin'izay.
Ny olana lehibe atrehin'ity vola ity ankehitriny dia ny tsy dia malaza be toa an'i Bitcoin ankehitriny, vola izay saika fantatry ny rehetra. Soa ihany, noho ny lazan'ity vola ity, ny ambiny amin'ireo safidy hafa hita eny an-tsena dia lasa be mpampiasa kokoa, na dia tsy eo amin'ny ambaratongan'ny Bitcoin aza izy ireo, vola efa natombohan'ny orinasa lehibe sasany hampiasaina. ampiasao ho fomba fandoavam-bola.
Ahoana no hividianana Litecoins
Raha tsy mikasa ny hanomboka ny fitrandrahana Litecoins isika, fa te hiditra amin'izao tontolo izao amin'ny vola virtoaly tsy fantatra anarana, afaka misafidy ny mividy litecoins amin'ny alàlan'ny Coinbase, ny serivisy tsara indrindra amin'izao fotoana izao mamela antsika hanao karazana fifanakalozana miaraka amin'ity karazana vola ity. Coinbase dia manolotra rindranasa iray hizaha ny kaontinay amin'ny fotoana rehetra na ho an'ny iOS na Android, fampiharana iray izay manome anay fampahalalana amin'ny antsipirihany momba ny fiovaovana mety hitranga amin'ny vola.
Te hampiasa vola amin'ny Litecoin ve ianao?
Tsindrio ETO raha hividy Litecoin
Mba hividianana an'io vola virtoaly io dia tsy maintsy ampidintsika amin'ny alalàn'ny kaonty banky aloha ny carte de crédit antsika.
Aza adino ny $ 10 MAIMAIM-POANA anao amin'ny Bitcoin amin'ny fikitihana eto!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » teknolojia » Cryptocurrencies » Inona ny Litecoin ary ahoana no hividianana Litecoin?
Tahaka izany ny fisehon'ny Meizu M6, telefaona tsara sy tsara ary mora vidy
Hamboarina ny router